Liiska Faylka ee Mareegahaaga - Liiska Faylka Fudud - Plugin Wordpress
Dalxiis Badeecad Buuxo
Liiska Faylka ee Shabakadaada
Liiska Faylka Fudud siinayaa boggaaga WordPress muuqaal buuxa leh liiska faylka iyo maamulaha faylka, u oggolaanaya isticmaaleyaashaada inay si fudud u helaan fur oo kala soo bixi faylasha. Isticmaalayaasha sidoo kale way awoodaan gal faylasha haddii aad doorato.
La wadaag faylashaada si guud ama si gaar ah
Liiska faylkaagu wuxuu noqon karaa si buuxda ugu furan dadweynaha ama waad awoodi kartaa xaddido gelitaanka dadka isticmaala kaliya ee galay ama Admins haddii aad doorato. Ku dar Maareeyaha Helitaanka Faylka Kordhinta Pro si loogu oggolaado liisasyo dheeri ah oo leh xaddidnaan isticmaale/door.
Ka shaqeeya Website -kaaga
Liiska Faylka Fudud wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud ula wadaagto faylasha qof kasta adiga oo isticmaalaya mareegahaaga. Waa beddel macmiil u badan oo adeegsanaya adeegyo guud, barar iyo wareer leh sida Google Drive, Microsoft OneDrive, DropBox, WeTransfer or FTP. Ku darso wuxuu ku hayaa isticmaaleyaashaada degelkaaga meesha aad ka taliso astaantaada.
Liiska Fudud ee Fudud ayaa sidoo kale ah beddel wanaagsan oo ku habboon plugins -ka maareeyaha faylka WordPress oo aan la taageerin, sida Xareyso iyo Mmm Liiska Faylka Fudud.
Bandhigga Aasaasiga ah
Fadlan soo gal fayl fiican ama saddex 🙂
Ka shaqeynta Galinta
Xadka xadka: 3 faylal
Xadka Xadka: 100 MB halkii fayl.
Noocyada La Ogolaaday: aiff, doc, docx, gif, jpg, jpeg, mp3, mp4, mov, pdf, png, tif, tiff, zip
Soo jiid-soodhadhka faylasha halkan ama isticmaal batoonka biraawsarka.
1 85f51fefca Aasaas-Demo f7509e68bb
Open Soo Degso Zip File 10 Items
54.5 MB September 28, 2021
aan la sheegin
Bogga: 1 ee 5
Liiska Faylka Fudud ayaa ku habboon…
Wadaagista faylasha ku dhex jira meherad, dawlad, urur ama beel si qof walba u fududaado, loo xaddido haddii loo baahdo, helitaanka dukumentiyadaada.
Add Maareeyaha Helitaanka Faylka si loogu oggolaado liisasyo dheeri ah oo leh isticmaale buuxa & xaddidnaanta doorka.
Markaad u baahato liiska faylasha la soo dejisan karo, sida sawirrada, dukumiintiyada PDF, faylasha xafiiska, faylasha CAD ama faylasha MP3 ama faylasha fiidiyaha.
Sawirrada sawir-gacmeedyada ayaa si otomaatig ah loogu soo saari karaa PDF iyo faylasha fiidiyaha.
Beddelidda faylasha marka cabbirku aad ugu weynaado lifaaqa iimaylka, taasoo adiga iyo macaamiishaada nolosha u fududaynaysa.
Markaad u baahan tahay uun foomka gelinta faylka aasaasiga ah si dadku kuu soo diraan faylal.
Waad oggolaan kartaa soo -dejinta dadweynaha adiga oo aan u oggolaan marin u helka dadweynaha liiska faylkaaga. Ku dar Maareeyaha Helitaanka Faylka si loogu oggolaado raridda raadraaca qof kasta. Isticmaal kasta wuxuu markaa arki karaa oo keliya faylalkooda.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad dhigto waxoogaa fudud ee koodh -gaaban; [eeSFL] bog kasta, dhejin ama widget si aad liiska faylka uga muuqato degelkaaga.
Muujinaya faylal gaar ah
Nooca Pro wuxuu u oggolaanayaa astaamaha '' showfolder '' oo ku rid fayl gaar ah bogga. Waxaad abuuri kartaa oo ku dhejin kartaa tiro aan xad lahayn oo fayl bogag kala duwan*
Adigoo adeegsanaya tan waxaad abuuri kartaa bogag badan oo liiska faylka ah, mid walbana wuxuu muujinayaa fayl ka duwan…
Fidinta ayaa leh goobo ballaadhan si aad u habayn karto muuqaalka iyo shaqaynta liiska faylkaaga. Ku dar Maareeyaha Helitaanka Faylka si loogu oggolaado liisas dheeraad ah, mid kasta oo leh dejintooda iyo tusaha liiska faylka.
Xaddid gelitaanka liistada si dadka isticmaala kaliya ay u arki karaan, u muujin karaan qof walba, ama u qariyaan gebi ahaanba.
Ku dar sharraxaadda faylasha si aad u qeexi karto waxa ku jira iyo/ama u hagaajin karto SEO. Sharaxaadaha sidoo kale way awoodaan la raadin karo.
Soo saar faylasha ZIP faylka maxalliga ah.
Ku habee liiska faylka hawsha dib-u-baarista disk si loo yareeyo culeyska server-ka ee liisaska waaweyn.
BUUGGA DEMO OO BUUXA
Raadi Su'aalaha La isweydiiyo iyo Dukumiintiyada Taageerada
Maqaallada Taageerada ee Dhawaan
Taageerada ugu Waxtarka Badan
Foomka Xiriirka Emailka